Maalinta: Sebtember 1, 2019
130Ş Basaska & Wadooyinka
Joogsiga basaska 130Ş waxaa si ba’an loogu baarayaa muwaadiniinta ku nool Istanbul ee ay tahay inay qadkaan adeegsadaan. Sababtoo ah 130Ş, oo ah xariiq aad u dheer, wuxuu dhex maraa joogsiyo badan. Waxaa qoray IETT 130Ş [More ...]
Dadka Istanbul waxay Jeclaadeen Gaadiidka 24 Waqtiga .. Ugu Horeyn 2 Habeenki 35 Rakaab kun Rakaab ah
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM), gaadiidka metrooga laba maalmood usbuuc kadib usbuucii ugu horreeyay ee 24 macluumaad la wadaago. 30 Agoosto laba habeen oo isku xirta 31 illaa Agoosto, iyo 31 isku xiraya Agoosto ilaa 1 Sebtember (maanta) [More ...]
Turkey ayaa ugu horeysay oo keliya, taas oo ah mid ka mid ah weerar Rally transanatoli ugu weyn oo ugu adag ee tartanka dunida ee ay 2019, 2 300 ka dib markii laga soo bilaabo Bolu 7 wadada kun oo kiiloomitir. Maalintii waxay ku dhammaatay Şanlıurfa. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa howlaha gaadiidka ee wadooyinka waaween iyo xarumaha magaalada, waxay sii wadaysaa hirgalinta mashaariicda fududeyn doonta gaadiidka muwaadiniinta ku nool xaafadaha ka baxsan xarunta. Wajigan, Çıraklı Quarter ee Degmada Körfez [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas (YHT) oo sii maraya Yozgat iyo qaybta tareenka ee qeybta socda ee dib-u-eegista. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas (YHT), ayaa sheegay in shaqadu ay socoto, dhamaadka sanadka tijaabooyinka tijaabada ah ayaa bilaabi doona inay siiso warka wanaagsan. Mashruuca Ankara-Sivas YHT ee degmada Akdağmadeni ee Yozgat [More ...]
Maanta ee Taariikhda: 1 Sebtember 2008 100 aasaasida Hejaz Railway